Pebble Beach Systems သည် IBC မှ RRsat နှင့်ပူးပေါင်းပြီး One-Stop Multichannel Playout Solution ကိုပြသရန် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » One-Stop Multichannel ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပြသရန် IBC မှာ RRsat နှင့်အတူ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမိတ်ဖက်
One-Stop Multichannel ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပြသရန် IBC မှာ RRsat နှင့်အတူ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမိတ်ဖက်
Weybridge, ဗြိတိန်။ 28th သြဂုတ်လ 2014:
RRsat ဂလိုဘယ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်, Ltd. end-to-end ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, အလိုအလျောက်အထူးကုနှင့်အတူမိတ်ဖက်လိမ့်မည် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ လာမည့်လတွင်ဖွင့် IBC မှာရှုပ်ထွေးမှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏လမ်းကြောင်းများတစ်ဦးတည်းရပ်တန့် Multichannel ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ရှိ Marina အလိုအလျောက်၏အသစ်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသရုပ်ပြရန်။ အဆိုပါ Marina က်ဘလိုင်းကနေတဆင့်လမ်းကြောင်းများ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားကို virtual စီမံခန့်ခွဲမှုကနေ, ပရီမီယံတုံ့ပြန်လိုင်းများအဘို့အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပလေးအောက်န်ဆောင်မှုများပေးရန်, Marina အလိုအလျောက်အပိုဆောင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတူတူသည့်စနစ်အတွင်းကနေကို၎င်း, စွမ်းရည်နှင့်အတူအားလုံးရုပ်သံလိုင်းအမျိုးအစားများကိုကိုင်တွယ်သည့် RRsat ရပ်တည်ချက်အပေါ်ပြသပါလိမ့်မည် ယင်းထုတ်လွှင့်မယ့်လိုအပ်ချက်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ။
RRsat မှာအသုံးပြုမှုအတွက် Marina
Marina ရဲ့အသစ်က်ဘလိုင်းအပ်လုဒ်တင်အကြောင်းအရာနှင့်သီချင်းစာရင်းကိုကိုင်တွယ်အပါအဝင်ဝေးလံခေါင်သီရုပ်သံလိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးရာပူဇော်သက္ကာကိုပြသပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သော RRsat အဖြစ် service provider ကဤထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုကမ်းလှမ်းနှင့်၎င်းတို့၏မီဒီယာဝန်ဆောင်မှု platform ပေါ်တွင်ဖောက်သည်များအတွက်လဲဆိုတော့ global access နိုင်ပါတယ်။ RRsat လည်းအတူပေါင်းစည်းသရုပ်ပြကြသည် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ'' လင်းပိုင်အတူတူပင်ရှိ Marina စနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် IP ကိုလက်ငင်းအတူရုပ်သံလိုင်း device ကိုပေါင်းစည်း။ ဤ IP configuration ကိုဒါအပေါ်သီးခြားကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ, စာတန်းထိုး devices နဲ့ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအတင်းအကြပ်, ဒီဗွီဘီဖောက်သည်ပလေးအောက်ကိုမှ RRsat နိုင်ပါတယ်။
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ နှစ်ပေါင်းများစွာ RRsat နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်3ရုပ်သံလိုင်းစက်ရုံအဖြစ်က၎င်း၏အစောပိုင်းကာလကနေနိုင်ငံတကာမှာယနေ့ပလေးအောက်န်ဆောင်မှုများမှာ NASDAQ-စာရင်းဝင်ဦးဆောင်ပေးသူမှ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာတစ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ RRsat ယခု3တိုက်ကြီးအနှံ့တွင်တည်ရှိသောမီဒီယာစင်တာများရှိပါတယ်, လက်ရှိ MTV, Nickelodeon, ဟာသဗဟို, ဖက်ရှင်တစ်ခုမှာ, KidsCo, ဘောလီးဝုဒ်အပါအဝင်ဖောက်သည်အတူ 130 တီဗီလိုင်းများကိုကျော်ဘို့ပလေးအောက်န်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည် HD, ကလေးတီဗီ, ကလေးပထမဦးစွာတီဗီ, Playboy, CNL နှင့် GINX ။
မိုရှေးဖာရက်, ပလေးအောက်န်ဆောင်မှုများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ, ငါတို့သည်ငါတို့၏စက်ရုံတိုးချဲ့နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သစ်ကို Emek HaEla တည်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါကျနော်တို့အလိုအလျောက်စနစ်များအကွာအဝေးအကဲဖြတ် "အတည်ပြု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအကျယ်ကွဲပြားခြားနားလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးမှုအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်၏လမ်းကြောင်းများပလေးအောက်နိုင်စွမ်းလိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်မှာဖြစ်သစ်ကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အရေးပါသောအဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်စီးပွားဖြစ်ရှုထောင့်ကနေကျနော်တို့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအိုင်တီ-based နဲ့ cloud-based ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူအမွေနည်းပညာများ exploit ဆက်လက်စွမ်းရည်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
"လွတ်လပ်တဲ့အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအလွှာအဖြစ်, Marina ချန်နယ်တစ်ခုစီ၏သီးခြားလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးနောက်ခံနည်းပညာရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့် client ကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Marina စနစ်အားလောလောဆယ်တွင်ပလေးအောက်ကိုဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားအစုစုတို့အတွက် 80 လိုင်းများကျော်ကို automation ဖြစ်ပါတယ်။ interfaces ဖို့နှင့်အတူ သဟဇာတ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ဆာဗာများအဖြစ်ပေါင်းစည်းရုပ်သံလိုင်းပစ္စည်းများမှ, တကသေတ္တာလုပ်ငန်းများအတွက်ရုပ်သံလိုင်းကနေမိုရှေးဆက်ပြီးဖောက် devices များ "၏အစဉ်အလာ discrete အကောင်းဆုံးရေးစပ်ဂီယာသံကြိုး, ငါတို့အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းချန်နယ်အမျိုးအစားများကျယ်ပြန့်ပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ "Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ ငါတို့ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သူတို့မှတဆင့်ရေရှည်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ခဲ့, ကြှနျုပျတို့ RRsat ချဲ့ထွင်အဖြစ်ရှိ Marina နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိုင်းပေါ်တွင်အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်လင်းပိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလေးအောက်န်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါတယ်သိရပါတယ်။ "
RRsat အကြောင်း - IBC 1.B24 ရပ်
RRsat ဂလိုဘယ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် Ltd (NASDAQ: RRST) 150 နိုင်ငံများထက် ပို. ဖုံးအုပ်သည်လျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ end-to-end, ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာပြင်ဆင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ၏ရေးစပ်င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်အားဖြင့် ဂြိုဟ်တု, fiber optic စွမ်းရည်နှင့်အများပြည်သူအင်တာနက်ကိုမြေပြင်, RRsat ထက်ပို 24 channel များကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း multiplatform အော်ပရေတာ, အင်တာနက် TV နဲ့တိုက်ရိုက်-to-အိမ်မှာကြည့်ရှုသို့ရောက်ရှိရန်7န်ဆောင်မှုအားဖြင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး 630 ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအားကစား, သတင်းနှင့်အခြားတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ 130 လိုင်းများထက်ပိုမိုပြည့်စုံသောမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုများပါဝင်သော, RRsat ရဲ့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလေးအောက်စင်တာများကိုအသုံးပြုပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သွားရောက်ကြည့်ရှု www.rrsat.com.
အကြောင်းအရာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ - IBC 8.C71 ရပ်
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ Multichannel ဂီယာ, သတင်း, အားကစားနှင့်အပြန်အလှန်ရုပ်မြင်သံကြားအဖြစ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု, workflow နှင့်တိုက်ရိုက် archive ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဒီဇိုင်းအရွယ်မှာထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလိုအလျောက်အတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး box ကိုများနှင့်ပေါင်းစပ်ရုပ်သံလိုင်းနည်းပညာချန်နယ်ဖြစ်သည်။ , 50 နိုင်ငံများထက် ပို. နှင့်စစ်ဆင်ရေးများတွင် 100 လိုင်းများကျော်တစ်ခုတည်းကနေဖွင့်ဖို့အထိသက်သေစနစ်များနှင့်အတူ Installed Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ စားသုံးမိအလိုအလျောက်, လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်, archive ကိုအလိုအလျောက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖိုင်-based Workflows ပတ်ဝိုင်းထားတဲ့ပွင့်လင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စနစ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
တွမ် Gittins - အရောင်းဒါရိုက်တာ
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ တစ်ဦး Vislink ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Vislink plc အကြောင်း - IBC ရပ် 1.A69
အဆိုပါ Vislink Group မှအသုံးပြုမှု၏အချက်မှအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုနှင့်လယ်ပြင်ကနေဆက်စပ်ဒေတာများစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ Vislink စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်မှဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်နှင့်တိုက်ရိုက်သတင်းများ, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအထဲက play နှင့်လုံခြုံဗီဒီယိုနှင့်ဒေတာဆက်သွယ်ရေး၏ပေးပို့များအတွက်ကာကွယ်ရေး, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖောက်သည်အပါအဝင်စောင့်ကြည့်ဈေးကွက်ရန်။ ဗြိတိန်, အမေရိကန်, ဘရာဇီး, ယူအေအီးနှင့်စင်္ကာပူတွင်ရုံးခန်းများနှင့်အတူ, Vislink ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 300 ကျော်ကလူဝန်ထမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်ခရိုဝေ့ဖ်ရေဒီယို၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းပါဝင်သည်, ဂြိုဟ်တု ဂီယာ, ဆယ်လူလာ, ကြိုးမဲ့ကင်မရာစနစ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကို; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ရှိကြ၏။
### ကြီးစွန်း ###
pebbletv အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
ဂျာမဏီရဲ့ ZDF Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များရှိ Marina အလိုအလျောက်နှင့်အတူလေကြောင်းရန်မှအားလုံး၎င်း၏လိုင်းများကြာ - မေလ 21, 2015
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမြောက်အမေရိကအရောင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် key ကိုသစ်ကိုချိန်းကိုကြေညာ - မေလ 21, 2015
One-Stop Multichannel ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပြသရန် IBC မှာ RRsat နှင့်အတူ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမိတ်ဖက် - သြဂုတ်လ 28, 2014
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ 2014-08-28
ယခင်: Motion-image နည်းပညာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရှစ်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် SMPTE ညီလာခံ '' Fellow '' အခြေအနေ
နောက်တစ်ခု: အင်ဒရူး Demeter: မီဒီယာသစ်, နယူးဖြစ်နိုင်သော - ဆယ်ကျော်သက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှမ်းခြုံ & IBC 2014